सञ्चार/ प्रविधि – Page2– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
वाइफाईको पासवर्ड, कसरि थाहा पाउने ? सिक्नुहोस !
इन्टरनेट अहिले हरेक मानिसको अभिन्न अंग बनेको छ । इन्टरनेट विनाको जिन्दगी धेरैले कल्पना गर्न पनि नसक्ने भईसकेको छ । इन्टरनेट विनाको जिबन कल्पना गर्न पनि सकिदैन । मानिसलाई पर्ने हर किसीमको समस्याको समाधान इन्टरनेटको माध्यमबाट हुन थालेको छ । नेपालमा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट काम गर्ने मानिसको संख्या विस्तार विस्तार बढदै..